‘बैंकको धूलोमैलो पखालेँ, अब सबै हिसाबले नम्बर वान बन्नुछ’ Bizshala -
किरण श्रेष्ठ भन्छन्–‘५ अर्ब नाफा बनाउँछु भन्दा सहकर्मीले नै पत्याएनन्, आज सबैलाई चुनौति भो’
किरणकुमार श्रेष्ठ(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सीइओ बनेर प्रवेश गर्दै गर्दा बैंकको अवस्था जस्तो थियो, त्यसमा ४ वर्षको अन्तरालमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ । बैंकको वित्तीय अवस्था र भौतिक पूर्वाधारमा पनि निकै ठूलो सुधार देखिएको छ । यो कसरी संभव भयो ?
तपाईले भनेजस्तो आजभन्दा लगभग ४ वर्षअघि म यो बैंकमा सीइओको रुपमा प्रवेश गरेको थिएँ । त्यसबेला मैले भनेको थिएँ–यो बैंकलाई देशकै राम्रो, सवल र नम्बर वान बैंक बनाइनेछ भनेर । हरेक हिसाबले यो बैंकलाई प्रतिस्पर्धी र अन्य बैंकको तुलनामा राम्रो बनाउँछौ भनेको थिएँ । नभन्दै आजको अवस्थामा हाम्रो वित्तीय सूचक सबैभन्दा सवल भयो । निक्षेप संकलनको सवालमा, कर्जा लगानीदेखि कमाईको सवालमा ठूलै खालको परिवर्तनका फिगरहरु देखिएका छन्।
हामीले भौतिक कुराहरुमा पनि सुधार र परिवर्तन गरेका छौ । हाम्रा सेवाहरुमा समेत सुधार गर्ने प्रयास गर्यौं र गरिरहेकै छौ ।
पहिलो कुरा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग स्रोतसाधनको कमी थिएन । जुन स्रोत साधनलाई हामीले भरपूर उपयोग गर्ने वा बिजिनेशको रुपमा लाने भन्ने कुरामा निकै ठूलो ग्याप थियो । तथ्याङ्ककै रुपमा भन्नुपर्दा नेपाल राष्ट्रबैंकको व्यवस्था अनुसार सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतसम्म जान पाइन्छ । अहिलेको बजारमा ८० प्रतिशतको सीसीडी पनि कम भयो भन्ने खालको अवस्था छ । तर, म यो बैंकमा आउँदा सीसीडी रेसियो जम्मा ५६ प्रतिशतमा सीमित थियो । यसको अर्थ ५६ र ८० बीचमा एकदमै ठूलो ग्याप थियो भन्ने हो । त्यो ग्यापलाई मैले क्रमशः साँघुरो बनाएँ । अहिले हामी लगभग ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यौं । यसको अर्थ यो ४ वर्षे अवधिमा रिसोर्सेजलाई हामीले एकदमै धेरै उपयोग गर्यौं भन्ने हो । त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्टहरु अहिले देखिएको हो । एउटा इफेक्ट–बिजिनेश भोल्यूम बढ्यो, यो बढ्नेबित्तिकै कस्टूमर बेस बढ्यो । यो बढाउनु भनेकै विभिन्न सेक्टरमा जाने अवस्था भयो । त्यसले गर्दा बिजिनेश विस्तारमा ग्रोथ भयो र त्यसको अन्तिम रिजल्ट प्रफिटमा देखियो ।
दोश्रो, यो बीचमा करिब १ हजार नयाँ कर्मचारी थपिए । ती कर्मचारीहरु लोकसेवाको ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएर आएका थिए । यी जनशक्ति युवा, उत्साही र डाइनामिक खालका थिए । नयाँ जोश र जाँगरसहित आएकालाई तत्कालै ट्रेन गर्ने अवसर भयो र नयाँ शैलीमा उनीहरुलाई परिचालन गर्न सजिलो भयो । यद्यपि पुरानै जनशक्ति पनि धेरै थियो । त्यो ठूलो संख्यामा जाँदा केही पीडा महसुस पनि भएकै हो । करिब १३०० पुरानो जनशक्ति गयो । त्यो ग्यापको अवस्थामा नयाँले त्यसको परिपूर्ति गरियो । मानव संसाधन परिचालनमा समेत हामीले विशेष ध्यान दियौं ।
तेश्रो, हामीले तल्लोस्तरमा म्यासिभ ढंगले तालिम संचालन गर्यौं । ओरिएन्टेसन कार्यक्रम चलायौं र कर्मचारीलाई ट्रेन गर्यौं ।
अर्को, म आफैंले हाम्रा कर्मचारी साथीहरुलाई प्रष्ट भिजन भनेको थिएँ सुरुमै । ‘हामीसँग यत्रो सरकारको ब्याकअप, नेकटवर्क र स्रोत छ । अब हामी–तपाई मिलेर यो बैंकलाई औसत बनाउने होइन’ । औसत त थियौ नै । यी सबै कुरा हेर्दा मैले नम्बर वान हुनसक्छ, नम्बर वान बनाउन सकिन्छ भनेर घोषणा गरेको थिएँ । ममा विकास भएको आत्मविश्वास साथीहरुसँग सेयर गरेँ । मानिस(कर्मचारी)हरुमा त्यो जुनुन सवार गर्न प्रेरित गरेँ । सबै इण्डीकेटरमा हामी एकनम्बर बन्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास हाम्रो टिममा जागृत भयो, तलदेखि माथिसम्मै । कहाँ जाने भन्ने लक्ष्य हामीले पायौं । सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नुछ भने बेसक्यापबाट कसरी जाने भन्ने कुरा हुन्छ । हामीमा पनि एउटा मानसिकता तयार भयो, जागृति आयो । हामी सबैले इमानदारितापूर्वक त्यो दिशामा काम गर्यौं, जसले गर्दा जागिरे प्रवृतिभन्दा पनि फरक ढंगले काम सुरु भयो । १० बजे अफिस आएर ५ बजे घर जाने प्रवृतिर्लाइ त्यागेर साथीहरुले पनि मैले देखेको सपनालाई साझा सपना बनाएर त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्ने अभियानमा लाग्नुभयो । हामीले लक्ष्यलाई अर्जुनदृष्टिमा राख्यौं । लक्ष्य प्राप्तिको निश्चित अवधि नै तोकेर अगाडि बढ्यौं । हाम्रा तल्ला लेभलका कर्मचारीसम्मै पनि यो कुरालाई राम्रोसँग बुझाउन सक्यौं ।
वित्तीय सूचकमा मात्र सुधार गरेर हुन्न, भौतिक पूर्वाधारमा समेत ठूलो सुधार र परिर्वत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महसुस भयो । त्यो बेला हाम्रा धेरै शाखामा आधारभूत र अति आवश्यक वस्तु पनि नभएको पाइयो । उदाहरणका लागि इसीसी मेसिन नभएको, एटीएम पनि कम संख्यामा भएको । तराईको गर्मीमा शाखा कार्यालयहरुमा एसीको सुविधा पनि नभएको अवस्था थियो । साइनबोर्ड पनि धूलामैला र फोहोरमैला देखियो । आधारभूत कुरा सबै पुर्याउनतर्फ लाग्यौं । त्यो ग्यापलाई पूरा गर्यौ । यसले तलसम्मै सकारात्मक परिवर्तनको संचार भयो, ‘अब त हामीसँग सबै छ है’ भन्ने सबै कर्मचारीलाई अनुभूत भयो । ‘इसीसी मेसिन छैन, फोटोकपी मसिन छैन, फर्निचर, कम्प्युटर छैन। कसरी काम गर्ने ?’ भन्ने गुनासो आउन बन्द भयो । यसले कर्मचारी तथा शाखाहरुमा सेटिस्फेक्सन लेभल बढ्यो । कर्मचारीहरुमा अभूतपूर्व आत्मविश्वास बढेको देखियो । पुराना र डेटएक्सपायर चिजहरुलाई नष्ट गरेर अगाडि बढ्यौं । ५० वर्षदेखि कागजहरु थुप्रिएर बसेका थिए, पुराना सामाग्री सबै तह लगाउने काम गर्यौं ।
यी २–३ वटा कुराहरुले यो सुधार संभव भएको हो । अब हामी प्रतिस्पर्धामा जान सकिन्छ भन्ने फिल भयो । यो कुराको कम्बिनेशनले प्रत्येक वर्ष रिजल्ट देखाउन थाल्यो । २ अर्ब ३५ करोडबाट नाफा बढेर ५ अर्ब बढीको अवस्थामा पुग्यो ।
केही वर्षअघिको एउटा कुरा तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। गोकर्णमा बैंकको एउटा कार्यक्रम थियो । मैले ५ अर्ब नाफा कमाउन सक्छु भनेँ, त्यो भन्दा धेरैलाई विश्वास पनि लागेन । धेरै बैंकको नाफा २ अर्बमा सीमित थियो त्यो बेला । धेरैले सरले यो चाहि असंभव कुरा गर्नुभयो पनि भने । तर, आज आएर मैले बोलेको कुरा यथार्थमा परिणत भयो । किनभने मैले त्यसबेला हिसाबकिताब गरेरै बोलेको थिएँ ।
तपाई प्रवेश गर्दै गर्दा र अहिलेको केही प्रमुख वित्तीय सूचकहरुको तुलना गरी हेरौं न ।
त्यतिबेला मैले प्रवेश गर्दा २ अर्ब ३५ करोडको प्रफिट थियो । त्यो अहिले आएर ५ अर्ब ४ करोड ६५ लाख माथि पुगेको छ । लोन ८५ अर्ब थियो, अहिले १ खर्ब ४६ अर्ब माथि पुगेको छ। डिपोजिट १ खर्ब ४६ अर्ब बढेर १ खर्ब ९० अर्ब भएको छ । नेटवर्थ ८६ करोड थियो, अहिले २ अर्ब १५ करोड भएको छ । खूद ब्याज आम्दानी त्यतिबेला ५५ करोड ४९ लाख बढेर ९९ करोड भएको छ । सीडी रेसियो बढेको छ । शाखाको संख्या १५७ बाट बढेर २३८ शाखा भइसकेका छौ । ८० एटीएम थिए २०५ पुगिसकेको छ । ग्राहक २८ लाख थिए अहिले आएर ३२ लाख पुगिसकेका छन् ।
हाम्रो पछिल्लो रिपोर्टमा पनि हामी एकनम्बरमै छौं । पहिलो त्रैमासका आधारमा मात्र होइन, दोश्रो त्रैमासको आधारमा पनि हामी नम्बर वानमै छौ ।
यो वर्ष चाहि प्रफिट कति पुग्ला ?
बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रबैंकले स्प्रेड रेटको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । असारसम्ममा हामीले ४.४ प्रतिशतमा त्यसलाई सीमित गर्नुपर्नेछ । त्यसले गर्दा प्रफिटको ग्रोथमा केही संकुचन आउन सक्ला ।
हामीमाथि आरोप र गुनासोहरु पनि थिए कि राबा बैंकमा डिपोजिटरले न्याय पाएनन् भनेर । हामीलाई धेरैतिरबाट ‘डिपोजिटरमैत्री हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा बारम्बार आएको थियो । यो वर्ष हामीले सुरुदेखि नै डिपोजिटमा ध्यान दियौं, राम्रोसँगले बढ्यो पनि । हिजो हाम्रो साधारण डिपोजिटमा ब्याज २ प्रतिशतसम्म थियो भने अहिले ४ प्रतिशत पुर्याएका छौ । विशेष बचतको ६ प्रतिशत र मुद्धतिको ९.७५ प्रतिशत पुर्याएका छौ । यसरी हेर्दा पनि हाम्रो बैंकको नाफा यो वर्ष पनि ५ अर्ब घट्दैन । तर, प्रफिटको ग्रोथमा चाहि तुलनात्मक रुपमा केही कमी आउनेछ ।
राबा बैंकमाथि लाग्ने गरेको अर्को एउटा आरोप पनि छ–यो बैंकले सबै कुरामा सुधार ल्यायो, धूलोमैलो सफा गर्यो, वित्तीय स्वास्थ्य राम्रो बनायो । तर, सेवा प्रवाहमा अझै ढिलासुस्ती छ । निजी क्षेत्रको बैंकको तुलनामा कस्टूमर सर्भिस झूर छ भन्ने आरोप छ । यो कुुरामा किन सुधार नभएको ?
हो अहिले धेरै आएको गुनासो हो यो । यसमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण, अहिले हाम्रो बैंकमा जति दरबन्दी किटान गरिएको छ, त्यसमा १ हजार मानिस कमी छन्, यो ठूलो ग्यापको अवस्था हो । ६६१ जनाको एक वर्षअघि विज्ञापन गरेका थियौं, लामो प्रक्रियाले गर्दा, अदालतमा मुद्धा परेका कारण, ती मानिस ब्लक भए । ३५० को नयाँ विज्ञापन पनि रोकियो । ६६१ कर्मचारी नहुँदा त्यसको प्रभाव कस्टूमर सर्भिसमा पर्यो । यो मुख्य कारण हो ।
अर्को कारण, हाम्रो टेक्नोलोजी पनि हो । हिजोको म्यानुअलबाट टेक्नोलोजीमा त आयौं । तर, त्यो टेक्नोलोजी युगअनुकूल भएन कि भन्ने हो । यसकारण प्रविधिको इन्ह्यान्समेन्ट गर्नतर्फ हामी लागेका छौं।
तेश्रो, हामी सरकारी बैंक भएकोले अरुभन्दा बढी नीतिनियममा टाइट हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्रबैंकको सुपरीभिजन छँदैछ, त्योबाहेक पनि हामीलाई हेर्ने अरु निकाय छन् । धेरै ठाउँप्रति हाम्रो जवाफदेहिता हुन्छ । त्यसकारण हामी अलिक बढी नियमहरुमा ध्यान दिन्छौ । अलिक बढी कागजपत्र चाहिन्छ । र, एउटा फेयरनेश चाहिन्छ भन्ने हाम्रो नीति हो । तलदेखि माथिसम्म हामीमा यो मानसिकता र प्रक्रिया छ । बन्देजहरुले पनि यस्तो भएकै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
तर, अस्ती आइतबारदेखि नयाँ भर्नाको केही पदहरु खुलेको छ । अघि मैले भनेको ६६१ मध्ये २५० जना मानिस फागुनको पहिलो सातासम्म आइपुग्ने भए । यसले पनि कस्टूमर सर्भिसमा केही सुधार होला ।
यस्तै, हामीले नयाँ आइटी रोडम्याप पनि बनाएका छौ । एकवर्षभित्र ठूलो परिवर्तन गदैैछौ, त्यसको सुरुवात भएको छ । यसपछि यो गुनासो अझै कम होला ।
तेश्रो, जति पनि नियम तथा प्रोसिडरहरु छन्, त्यसमा पनि सुधार आवश्यक छ । यो कुरा बोर्ड लेभलमा पनि महसुस भएको छ । हाम्रो सेवामा जनशक्तिलाई ल्याउनुपर्छ, प्रविधिमा सुधार, अनावश्यक प्रक्रिया छ भने हटाएर जानुपर्छ भन्ने महसुस भएको छ । यी तीन सुधारले हामीले यो गुनासो कम गर्न सक्छौ होला ।
मैले यो पटकको बजेटको नारा नै राखेको छु–‘क्लिन एण्ड स्मार्ट आरबीबी विथ कन्सोलिडेसन’ । क्लिनको कुरा गरेँ, फिजिकल र बुक क्लिनको कुरा । स्मार्टको कुरा टेक्नोलोजी, मानव संसाधनसँग जोडेँ । कन्सोलिडेसनमा सिस्टम डेभलपममेन्ट, पोलिसी प्रोसेस रिभ्यू लगायतका कुराहरु छन् । यी काम पनि कम्प्लिट भयो भने राबा बैंक निकै राम्रो बैंक बन्नेछ । हामी डिपोजिट, प्रफिट, कस्टूमरमा मात्र होइन, सबैमा नम्बर वान बन्नेछौ ।
यहाँसँग सहमत हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अझै धेरै कोणबाट सुधार गर्न बाँकी नै छ । सुधार गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी रहेकै अवस्थामा तपाईको कार्यकाल चैतमा सकिँदैछ । अब के हुन्छ ? राम्रो काम गरिरहेको व्यक्तिको यही जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइनुपर्ने माग पनि हुनसक्ला ? अथवा तपाईको भनाई र योजना के हो ?
हाम्रो ठूलो बैंक हो । लामो इतिहास बोकेको बैंक हो । यसको आफ्नै पृष्ठभूमि, लिगेसी, परम्पराहरु छन् । अर्कोतर्फ, यो उद्योगमा निकै ठूलो प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ। मर्जरका कारण ठूला–ठूला बैंक बनिरहेका छन् । आगामी दिनमा नयाँ खालका ठूलो चुनौतिहरु छन् । हिजो पनि चुनौति त थिए, तर अब नयाँ खालका ठूला चुनौतिको सामना गर्नुपर्नेछ । यो अवस्थामा राबा बैंकको नीति के हुन्छ त ? निकै ठूलो चुनौति छ ।
सबै बैंक आक्रामक छन् । मर्जरको प्रयासमै देखिन्छन् । सबैलाई नम्बर वान बन्ने चाहना छ । हिजो पो सरकारी बैंक नम्बर वान हुँदैन भन्ने थियो, त्यसको कुनै थ्रेट कसैलाई थिएन । आज त यो थ्रेट बन्यो, हामीले बनायौं । सरकारी बैंकका लागि पनि आगामी दिन अझै चुनौतिपूर्ण छ । यस्तो अवस्थामा मैले दुई तरिकाले हेरेको छु । एउटा–मलाई दिइएको जिम्मेवारी तथा मैले गरेका सम्झौताहरु एक–एक पूरा भएका छन् । सबै पूरा मात्र गरिन्, प्रतिबद्धता नगरेका सुधारका काम पनि गरेको छु। हिजो टार्गेट सेट नगरेका, सम्झौतामा नभएका कुराहरु पनि गरेको छु । मैले देखेका, अनुभवका कुरा पनि मैले गरेको छु। एउटा हदसम्म पुर्याउने काम भएको छ । राम्रा रिजल्टहरु आएका छन् । कत्तिको परिवर्तन भयो, बाहिरका व्यक्तिले भन्ने कुरा हो । तर, हामीलाई पनि त्यो अनुभूति भएको छ । हामीले केही फरक गरेका छौ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । यो हिसाबले म सन्तोषजनक अवस्थामा छुजस्तो लाग्छ ।
र, आगामी दिनमा यसको मूल्याङ्कन गर्नेहरुको जिम्माको कुरा पनि हो बाँकी कुरा । उहाँहरुले के चाहनुुहुन्छ भन्ने कुराले आगामी दिन बनाउँछ ।
तर, राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको आफ्नो इच्छाको कुरा पनि त हुन्छ होला नि त ?अवसर दिनेले अवसर दिए अर्को कार्यकालका लागि पनि म तयार छु भन्ने पनि त हुन्छ नि !
अहिले म ठ्याक्कै त्यो ठाउँमा पुुगेको छैन । अझै पनि काम गर्न बाँकी छ । केही काम सुरु गरेका अझै पूरा हुन बाँकी छ । केही समयपछि यो विषय तपाईसँग सेयर गर्छु ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा राबा बैंक अरुभन्दा अगाडि छ । अहिलेको अवस्था के छ ?
सहुलियतपूर्ण कर्जा अहिले ९ वटा क्षेत्रमा दिइन्छ । सरकारको बैंक भएकोले हाम्रो यसमा विशेष प्राथमिकता पनि छ । देशका २६ वटा वाणिज्य बैंकबाट जति पनि सहुलियत कर्जा वितरण भएका छन्, त्यसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी हामीबाट मात्रै प्रवाह भएको छ । संख्यात्मक र रकमको हिसाबले हामी अगाडि छौ । तर, सबैभन्दा बढी गुनासो पनि यसैको विषयमा छ ।
एउटा गुनासो, बैंकहरुले कर्जा दिएनन् भन्ने छ । दोश्रो, यो कर्जाको शीर्षकलाई अलिकति समस्याको रुपमा लिन्छन्, यसलाई राम्ररी सम्बोधन गर्दैनन् । तेश्रो, कागजी प्रक्रिया लेन्दी भयो भन्ने कुरा छ ।
अब हामी यसलाई सम्बोधन गर्ने कोशिश गरिरहेका छौं । ब्याजदरको सिस्टम–बेस रेटमा प्लस टू प्रतिशत प्रिमियम लगाउने, महिलाको हकमा ६ र पूरुषको हकमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ । हाम्रोजस्तो थोरै बेस रेट भएको बैंकमा यो कर्जा ‘महासहुलियत कर्जा’को रुपमा पाउने अवस्था बनेको छ । यहीकारण अरुमा भन्दा हामीमा बढी चाप परेको छ ।
दुईवटा समस्या छ । एउटा, जेन्यून मान्छे छ, कुरा सुन्यो, काम गर्ने खालको छ । तर, उसले प्रपोजल बनाउन जान्दैन । मेरो आम्दानी कति हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, कति नाफा हुन्छ, ५ वर्षभित्र कसरी लोन तिर्छु भन्ने जान्दैन । हामीले फरम्याट दिंदा पनि ऊ जान्दैन । यो खालको ग्यापमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।
युवा परिषदका साथीहरुले यो कुरा थाल्नुभएको छ । यो कुरामा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ, सरकारी वा अन्य निकायको तर्फबाट । ताकि उसले भनेको कुरा एसेप्टेबल फरम्याटसहित बैंकमा प्रस्तावको रुपमा आओस् ।
अर्को, नकारात्मक खालको सोंच पनि छ । अन्ततगोत्वा यो कर्जा मिनाहा हुनसक्छ भन्ने गलत मानसिकता पनि छ । ‘यो तिर्नुपर्दैन, यो जसरी पनि लिइहालौं’ भन्ने खालका मानिस पनि देखिएका छन् । ‘भनसुन गरेर हुन्छ कि, प्रभावमा पारेर हुन्छ कि लिइहालौं’ भन्ने कतिपयको मानसिकता देखिन्छ। प्रोजेक्ट अर्काको देखाएर लोन लिने प्रवृति पनि देखिएको छ । पढेलेखेका जान्नेहरु पनि जेन्यून्लि आइरहेका छैनन् । पैसा कसरी लिने भन्ने मात्र ध्याउन्न छ ।
यसकारण पनि मैले पाइँन भन्ने धेरै गुनासा आइरहेका छन् ।
यही विषयलाई ध्यान दिएर हामीले केही व्यवस्था गरेका छौ । कर्मचारी अभावले पनि हामीले समयमा काम गर्न सकेका छैनौ । उपत्यकामा हामीले यसका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौ । उपत्यकाव्यापी म्यानेजरको भेलामा दिउँसो २ बजेपछिको डेडिकेटेड समय छुट्याउन भनेका छौ । २ बजेपछिको समय सहुलियत कर्जालाई मात्र दिन भनेका छौ । युवा परिषदका साथीहरुलाई पनि यो कुरा सेयर गरेका छौ ।
यो कर्जा उद्यमी बनाउनका लागि हो, बाँड्नका लागि होइन भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक छ ।
हामीले अहिलेसम्म ९५४ वटा सहुलियत कर्जा स्वीकृत गरेका छौ । ७८ करोड ७८ लाख ८० हजार पुस २७ गतेसम्म प्रवाह गरेका छौ । आएकामध्ये ४४७ अस्वीकृत पनि भए । जम्मा १४०१ वटा प्राप्त गरेका थियौं । सबैभन्दा बढी ५८ करोड बढी महिलामा गएको छ । अर्को खुशी लागेको चाहि दलित समुदायको कर्जा ७४ जनामा गएको छ । राम्रै खालको मान्नुपर्छ यो अवस्थालाई । हिजोको दिनमा आरन चलाइरहेको, जुत्ता सिलाइरहेको थियो, सिलाईको काम गरिरहेकाले समेत कर्जा लिएका छन् । भूकम्पपीडितलाई पनि गएको छ ।
हामीले अनुदानसहितको कृषि कर्जा पनि दिएका छौ । यो सबै जोडियो भने ७ अर्ब ९१ करोडको कर्जा गएको छ । अनुदानसहितको कृषि कर्जामा ७ हजार ५०० स्वीकृत भएको छ ।
सरकारी कार्यक्रम हो । हामी जतिसक्दो सक्छौ, अझै आक्रामक रुपमा जानेछौ ।
अर्कोे अघोषित कुरा, हामीले १ प्रतिशमा जानुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। कुल कर्जाको १ प्रतिशत सहुलियत कर्जामा जानसक्ने हो भने हामीले मात्र यो शीर्षकमा १ अर्ब ६० करोड लोन प्रवाह गर्नुपर्ने रहेछ । आन्तरिक रुपमा साथीहरुलाई यो कुरा भनेको छु। सरकारी बैंक भएकोले सरकारी नीति तथा योजना लागू गर्दो रहेछ भन्ने विश्वास दिलाउनुछ । नभए निजी र सरकारी बैंकबीचको अन्तर के त ? सरकार र जनतामा पनि सावित गर्नुपर्छ कि सरकारी बैंकले साच्चिकै सरकारी कार्यक्रम लागू गर्दोरहेछ । भोलिका दिनमा हामीले १ अर्ब ६० करोडसम्म लोन प्रवाह गर्नसक्छौ । यसलाई बोझको रुपमा लिनुहुन्न भनेको छु साथीहरुलाई ।
सहुलियत कर्जाकै कुरा गर्दा तपाईहरुले बढी प्रवाह गर्नुभएको छ । त्यो कति क्वालिटीको योजनामा गयो भन्ने कुरा पनि त आउला नि ? कर्जा लिनेले त्यसको उपयोग गर्यो कि गरेन, जीवनस्तर र आयस्तरमा सुधार भयो कि भएन भन्ने पक्षलाई कसरी जाँचिरहनुभएको छ ?
तपाईले एकदमै महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । हामीले कर्जा त दियौं, तर त्यो बाँड्ने पैसा होइन । हामीले यो विषयको अध्ययन गर्न थर्डपार्टीलाई जिम्मा दिंदैछौ । यसको प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । साच्चिकै गर्यो कि गरेन काम भन्ने कुरा हेरिनुपर्छ । यो विषयमा सेकेण्ड क्वार्टरभित्रमा रिभ्यू गर्ने भनिएको छ । यस्तो कर्जाको सदुपयोग हुनुपर्छ, नभए उद्देश्य नै पूरा हुँदैन ।
मर्जर, एक्वीजिसनपछि ठूलो बैैंक बन्ने र नम्बर वान हुने प्रतिस्पर्धा छ अहिलेको बैंकिङ उद्योगमा । आरबीबीको अबको बाटो के हुनसक्ला ? कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
मेरो व्यक्तिगत विचार हो है यो । निजी क्षेत्र र निजी तथा सरकारी मिश्रण भएको बैंकहरु छन् नेपालमा । एउटा सरकारी बैंक पनि छ । त्यसकारण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई सरकारी बैंककै रुपमा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर, मर्जर र एक्वीजिसनले निम्त्याएको चुनौतिको सामना गर्न यसको पनि पूँजी वृद्धि चाहि हुनैपर्छ । सरकारले यसमा थप लगानी गरेर प्रतिस्पर्धी बन्न सक्नुपर्छ । भोलिका दिनहरुमा लाभांश प्लान गर्दा पनि ठूला बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ठूलो सरकारी बैंक बनाउने हिसाबले लान सक्नुपर्छ ।
यो विषयमा कुनै छलफल भएको छ ?
औपचारिक छलफल त भएको छैन । तर, मोरललेस सबैको मानसिकता चाहि म यही देख्छु। सबै तहमा यो मानसिकता देख्छु। सुदृढ र बलियो एउटा सरकारी बैंक चाहिन्छ, यसलाई ठूलो पनि बनाउनुपर्छ भन्ने सोंच सबै तहमा छ ।
बैंकहरुलाई स्प्रेड दरमा कसियो । नियामकीय व्यवस्थाका कारण खर्चहरु बढे । यो वा त्यो नाममा बैंकको प्रफिट हिट हुने अवस्था पनि आयो ।
तपाईको व्यक्तिगत धारणामा स्प्रेड दरलाई घटाउनुपर्ने, सामान्य कर्जामा करचुक्ता प्रमाणपत्र चाहिने लगायतका व्यवस्था आएर ठीक भयो ? यसले हाम्रो विजिनेशमा हिट गरेको छ या छैन ? यी व्यवस्थामा परिमार्जन हुनुपर्छ या यही ठीक छ?
स्प्रेड रेट चाहि केही समयपछि ४.४ बाट ४ मै आउँछ होला जस्तो लाग्छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि यो कुरा स्वीकारयोग्य नै मानिएला । अब हाम्रो विजिनेशको मानिसकताहरु फराकिलो पार्दै लैजानुपर्छ । नियमनमा जाने कुरामा सबै तयार हुनुपर्छ । हरेक कुरालाई ट्रयाकमा ल्याउने कुरा गर्नैपर्छ । तर, यसलाई दुईवटा कुरा गरे व्यवहारिक हुन्छ । कतिसम्मको विजिनेशले यो कुरा गर्ने, सानातिना व्यवसायलाई कुन खालको लचकता दिने, कुन टाइमलाइन दिने भन्ने व्यवस्था चाहि हुनुपर्छ । एकैपटक सबैलाई एउटै नियमले बाँध्दा समस्या आउनसक्छ । यसलाई समयबद्ध तालिका बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
दोश्रो, अहिलेको बैंकिङ कसूर ऐनले पनि बैंकरहरुमा त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको छ । केही अघि यस्तै घटना पनि भयो । यसले गर्दा हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रको मौलिक खालको डिसिजन प्रक्रिया, अभ्यास, संरचनागत सिस्टमलाई हेरेर त्यो कानूनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । गलत गर्नेलाई दण्डित गर्ने कुरामा विवाद भएन, तर हाम्रो मौलिक बैंकिङ अभ्यास के हो, कसरी बैंकिङ निर्णय हुन्छ, कसको जवाफदेहिता र जिम्मेवारी कति हुन्छ, कुनै निर्णय प्रक्रियामा डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट सहभागिता कसको कति हुन्छ भन्ने विषय पनि हेरिन आवश्यक छ । त्रासको वातावरण बनाइनुहुन्न । बैंकरहरुले त्रासरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्था बन्नुपर्छ ।
सरकारी बैंकको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । बैंकको सीइओ राम्रो विश्लेषक पनि हो । पछिल्लो कालको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको गाडी सही दिशातर्फ छ ? कतिपय बैंकर तथा विश्लेषक भन्छन्–बैंकबाट लोन माग हुन छाड्यो, उद्योगी कर्जा लिन चाहदैनन्, स्रोतको उपयोग भएन, आदि इत्यादि । तपाईको विश्लेषण के हो ?
सरकारको बैंकको सीइओ भएको हिसाबले भन्दिँन म । व्यक्तिगत हिसाबले भन्दा हाम्रो अर्थतन्त्र राम्रो दिशातर्फ अगाडि बढेको छ । अधिकांश आर्थिक परिसूचक राम्रा छन् ।
हिजो हामीले नियमन भोगिरहेका छौ, यसकारण कतिपय अवस्थामा कडाई महसुस गरेका छौ । विजिनेशमा ठूलो खालको ह्रास आएको छैन । १८ प्रतिशतसम्मको कर्जा ग्रोथ छ भने माग नभएको भन्न त मिलेन । १० वर्षदेखिको ट्रेण्डमा यही देखिन्छ । तर, यो डिमाण्डमा यो ग्रोथ अझै माथि जान सक्थ्यो, पथ्र्यो । हामीमा लोनेबल फण्डको अभाव छ । कर्जाको माग जसरी बढेको छ, डिपोजिट बढेको छैन । हाम्रोमा वित्तीय पहूँच अझै पुगेको छैन ।
अर्को, आन्तरिक स्रोतले मात्र पुग्दैन । ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी चाहिन्छ । ५०० मेगावाटको आउन लाग्यो भने २० करोड हिसाब गर्दा ठूलो रकम चाहिन्छ । यस्ता योजनामा बैंकबाट जाँदा ठूलो पैसा जान्छ । ठूलो खालको परियोजनालाई वैदेशिक स्रोत ल्याउने काम गर्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिले क्रमशः खुकुलो पार्दै ल्याएको छ डिपोजिट ल्याउने सवालमा । बैंक वित्तीय संस्था बाहेक अरु ठाउँबाट पनि ल्याउन पाउने भनिएको छ, यसलाई अझै फराकिलो पार्दै लगिनुपर्छ ।
वित्तीय पहुँच बढाउने, आन्तरिक निक्षेप बढाउने, वैदेशिक स्रोत भित्र्याउने र फण्ड ल्याउनका लागि सहजीकरण गरियो भने अझै यसले गति लिन्छ ।